I-Cheesecake ene-blueberries -Iindlela zokupheka zeThermomix | ThermoRecipes
Ikhekhe kunye neBlueberries
IdessertImizuzu ye558 abantuIikhalori ezingama-250
por UAlicia tomero
Le cheesecake yahlukile ngenxa yokuthungwa kwenhlama kunye nebhisikidi. Iresiphi yesonka samasi kakhulu apho ukuzaliswa kwayo kulula kangangokuba ine-cream kunye neeblueberries.
Inhlama yenziwe ngomgubo, ihabile kunye nebhotolo, kodwa iyakumangalisa ngomxube wayo wevumba phakathi kwelamuni nesinamon. Uyakuthanda ukuthungwa kwayo okuza kuhlala kwisiseko sekhekhe kunye nokuqhekeka phezulu.
Yikhekhe leklasikhi kunye nelokuvunwa, kunye nesongezelelo seeblueberries, isiqhamo esityebe kakhulu kwii-antioxidants kunye neevithamini. Ungabukela umboniso wevidiyo ukuze ungaphoswa ngamanyathelo ayo.
1 Ikhekhe kunye neBlueberries
Gcina le recipe
Nceda ungene ukuze ugcine
Le cheesecake iresiphi yeklasikhi ngaphandle kwezithako ezininzi ekugcwalisweni kwayo, itshizi kunye neeblueberries. Yenziwe ngolungelelwaniso lwentlama kunye necookie eziya kuguqula incasa yale dessert yakudala.
Uhlobo lweRipeipe: dessert
Ixesha lokulungiselela: 20M
Ixesha lokupheka: 35M
Ixesha elipheleleyo: 55M
110 g ibhotolo ethambileyo
I-zest ye-lemon okanye amaconsi ambalwa e-lemon essence
I-40 g ye-oat flakes
100 umgubo wengqolowa
1 itispuni yokubhaka umgubo
1 ithisipuni yomhlaba isinamon
1 ityuwa encinci
I-450 g yohlobo lwekhilimu itshizi ePhiladelphia
I-100 g yeeblueberries
Sifaka iglasi yethu yeThermomix zonke izithako ezomileyo i-100 g yomgubo wengqolowa, i-40 g ye-oat flakes, itispuni yempuphu yokubhaka, icephe lesinamoni yomhlaba, intwana yetyuwa, i-zest yelamuni kunye ne-150 g iswekile. Sidibanisa konke ngexesha Imizuzwana emi-10 kwisantya 3.
Yongeza i-130 g yebhotolo kunye nenkqubo kwakhona Imizuzwana engama-45 kwisantya 3,5. Kufuneka kubekho intlama ephantse yahlangana ngenkangeleko yesanti, esiza kuyixova ngezandla zethu xa siyifaka epanini.
Silungiselela ipani ejikelezileyo emalunga ne-18 cm ububanzi enokususwa ngokulula kubumba. Ukuba akunjalo, siza kubeka isiqwenga sephepha lesikhumba emazantsi ukuze sikwazi ukususa ngokulula ikhekhe xa ibhakiwe. Sithatha inhlama kwaye siyigalela kwisiseko sepani. Ngezandla zethu sicinezela ukuze yandiswe kakuhle kwaye icabalele. Sibeke bucala.
Kwiglasi yethu ecocekileyo siya kulungisa ikrimu yokugcwalisa. Songeza u-450 g wekhilimu, i-75 g yeswekile kunye ne-lemon zest okanye i-drop of vanilla extract. Sixuba ngexesha Imizuzwana emi-15 kwisantya 3,5.
Sibuyisela ukhilimu epanini kwaye sisasaze inhlama kakuhle de umphezulu wayo ube mpuluswa. Siphosa iiblueberries ngaphezulu kwaye sizithi nkxu kwintlama. Siphosa amaqhekeza entlama ngaphezulu. Siza kuzithatha ngesandla sizidibanise zibe ziingceba ezincinci.
Sifaka kwi-oveni nge-180 ° kwitreyi esezantsi-ngaphakathi kwaye ngobushushu phezulu nangaphantsi. Siyibhaka malunga nemizuzu engama-25, de kube sibona ukuba umphezulu wayo ubrawuni. Sisusa ehovini kwaye siyeke ukuphola. Singayifaka kwifriji ukuze ikhawuleze ngakumbi kwaye ithathwe intsha.
Fumanisa ezinye iiresiphi ze: Postres
Umendo opheleleyo kwinqaku: Thermorecetas » Thermomix zokupheka » Postres » Ikhekhe kunye neBlueberries
Ikhekhe lesiponji kunye neyogathi ukusela
Ikhukhamba ebandayo kunye nesuphu yeyogathi